SIDA LOO XIRO DIGIR CAGAAR AH XILLIGA JIILAALKA - DIGSIYADA
Ugu Weyn Ee Digsiyada
Cuntada ugu fiican ee digirta cagaaran ee jiilaalka guriga
Dhamaanteen waan jecelnahay oo inta badan isticmaalnaa digir cagaaran. Saladhyo badan oo jecel lama laha. Maqaalkeena waxaan ku sharxi doonaa faa'iidooyinka ay keenayso, iyo sidoo kale sida loo xiro digir cagaar ah siyaabo dhowr ah guriga. Markaad diyaarisid naftaada, waxaad dhadhan kartaa dhirta delicious ee xilliga jiilaalka.
Digirta cagaaran waxay caan ku tahay maaddooyinka kalooriga hooseeya: 100 g waxaa ku jira 55 kcal oo keliya.
Waxay leeyihiin qiimo koronto oo yar marka la barbar dhigo kuwa iskaa wax u qabta, sidaas darteed waxay ka mid yihiin cuntooyinka cuntada.
Waa muhiim! Marka aad soo iibsato digir qasacadaysan ee dukaanka, fiiro gaar ah u leh awooda - waa inaysan jirin wax shaki ah. Burburku wuxuu tilmaamayaa hawo goys ah, iyo digirta noocan oo kale ah waxay noqon kartaa khatar iyo hanjabaad u ah sunta.
Digirta cagaaran ee cagaaran waxay ku jiraan xaddi badan oo fiitamiin ah iyo macdano muhiim ah. Waxaa ku jira nafaqada ugu muhiimsan - borotiinka dhirta, kaas oo si dhakhso ah u nuugay.
Digirta ayaa faa'iido u leh inay gacan ka geystaan ​​dhimista suurtagalnimada wadno-qabadka, dhiig-karka iyo cudurrada kale ee wadnaha. Digirta cagaaran ayaa ah qayb ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ay tahay inay ku jiraan cunto caafimaad leh. Pea macaan - waa daaweyn maqaarin oo heer sare ah, waxaa inta badan la cunaa marka uu dhaco bararka ama jiritaanka dhagxaan kelyaha.
Soo saarista wanaagsan waa faleebo dhirta sida: juniper, jimicsiga dabaasha, iglitsa, dahabka, gogortii dayrta, maaraynta, xajmiga, digirta.
Suxuunta oo lagu daray dheecaanka digirta ah waxay leeyihiin saameyn anti-sclerotic ah. Peas - mid ka mid ah digirta yar ee Nitrates aysan ku ururin.
Noocyo la soo jeediyey
Ka hor inta aadan ilaalin karin digir cagaaran guriga, waa inaad ogaatid noocyada noocan oo kale ah tan u fiican. Waqtigeena waqtigeena ilaalinta inta badan dooro nooca noocaas ah sida kan ugu sarreeya, marka hore iyo miiska. Fikrad u yeelashada caanaha maskaxda ee si gaar ah loogu talagalay ujeedooyinkaas. Digirta ay jilicsan yihiin iyo macaan, halka dareerka cabitaanka hagaagsan uu cad yahay.
Noocyada noocan oo kale ah waxay sidoo kale ku habboon yihiin ilaalinta.:
Waxaa jira cuntooyin badan oo lagu kariyo digir qasacadaysan, qaar ka mid ah kuwaan hoos ku qeexnay.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad barato sida loo xoqdo digirta cagaaran xilliga jiilaalka.
Cunnooyinka Beerka Cagaaran ee Cagaaran
Digirta dalagyada waxaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan: iyadoon la isticmaalin iyo nadiifin. Aan fiirino sida ugu habboon ee digir cagaar ah si fudud loo ilaalin karo guriga.
Iyadoo aan la isticmaalin
Haddii aad leedahay dacha, waa fiicantahay, maxaa yeelay waxaad ilaalin kartaa digirta aad adigu koray. Si kastaba ha ahaatee, ha ka murugoodaan haddii aad tahay qof degan magaalada. Waxaad iibsan kartaa mid ku habboon cagaarka digirta suuqyada.
Ma taqaanaa? Diiwaanka loogu talagalay digirta xilligaas ayaa la duubay 1984. Milkiiluhu waa Janet Harris, oo u suurtagashay in uu cuno 1 saac 7175 peas oo ku dheggan hal ul wax uun.
Julaay waxay ku habboon tahay caanaha. Waxaanu kuugu deeqaynaa inaad barato cunto karis fudud oo la awoodi karo oo aan u baahnayn in la nadiifiyo. Sidaa darteed waxaad u baahan doontaa:
digir cagaaran (oo ah 3 litir).
biyaha la nadiifiyey - 1 l;
cusbo - 3 tbsp. l;
sonkorta - 3 tbsp. l;
Tallaabada ugu horreysa waa in la diyaariyo nafaqada nafaqada - ka soo saar boogaha oo si fiican u biyo raaci. Ilaalinta waxaa ka mid ah talaabooyinka soo socda:
Waa lagama maarmaan in la kariyo marinade: biyo karkariyo, taas oo horey loogu darey waxyaabo badan.
Karkari isku dar ah mudo ah ¼ saacadood.
Ku shub qanjaruuji (1 tsp.).
Diyaarso gasacadaha: ku shub biyo karkaraya iyaga.
Shumovka waxay ka heli karaan digir ka soo bakhaarka oo ku faafaya bangiyada. Xagga sare ee waa inay ahaataa masaafada 15mm.
Ku shub daboolka digirta digirta.
Weelasha daboolka leh daboolka iyo ku rid meel qabow ah, oo laga ilaaliyo iftiinka. Haddii aadan haysan maqnaansho, waa inaad ka baxdaa bangiyada qaboojiyaha.
Qodobka caanaha oo aan lahayn jeermis-dilid waa wax sahlan, xitaa kuwa bilawga ah ee goobtan si sahlan ayey u baran karaan.
Baro siyaabaha ugu wanaagsan ee loo guran karo strawberries, tufaax, abrikot, isteroberi, jeeriga, blueberries, currants, basbaaska, eggplant, digirta dhirta, dill, cilantro, sorrel, dhir jiilaalka.
Haatan waxan fiirin karnaa khudaarta cagaaran ee cagaaran ee qasacadeysan.
Waa muhiim! Bangiyada leh seerfudud yar waa in isla markiiba la furo - lama kaydin karo. Riix bartamaha daboolka - haddii ay soo baxdo, waa inaad furto oo aad baabbi'isaa digirta ka hor inta aan la jarin.
Sidaa darteed waxaad u baahan doontaa:
digirta diiray - 600 g;
1 iyo hal litir litir ama 3 garaac;
acid (citric ama acetic);
cusbo - 1 tbsp. l;
sonkorta - 2 tbsp. l;
biyaha la nadiifiyey - 1 l.
Canning waxay ka kooban tahay tallaabooyinka soo socda.:
Beerka waa in la kariyaa 3 daqiiqo.
Ku dar maaddooyin dabacsan oo biyo ah, karkari.
Digirta faafa ee gasacadaha nadiifka ah.
Ku shub marinade karkaraya iyaga.
Kala jarjar digir ah oo loogu talagalay sterilization 3 saacadood.
Ka saar weelasha biyaha, daboolo daboolka iyo dabool buste kulul.
Dhawristaashadani waa la dhammeeyaa, hadda waxaad u baahan tahay inaad soo saartid digirta.
Kaydinta saxda ah
Xulashada habboon ee kaydinta ilaalinta waa saldhigga ama maqnaanshaha, laakiin haddii aad ku nooshahay guri dabaq ah, waxaad ku rid kartaa dhalooyinka ku jira qaboojiyaha. Nolosha shafka ah ee caanaha noocan oo kale ah waa ugu badnaan 12 bilood, laakiin dhab ahaantii way dhammaatay.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay ee ku saabsan digirta bilaabay in ay xusaan kale 3 kun oo sano BC. Iyo illaa qarnigii XVIII, waxaa loo tixgeliyey niyadjabkii ugu xumaa.
Haddii aad furto weel diirran ah - xasuusnoow in qaabka furan ee qaboojiyaha, aysan ka soo bixi karin wax ka badan 3-4 maalmood. Waqtigaan ka dib, dareeraha wuxuu noqonayaa bacar, digirku wuxuu helayaa dhadhan dhan, iyo caaryada ayaa laga yaabaa inay soo baxaan.
Ka dib markaad dib u eegto fursadaha caansan ee la soo bandhigay, waxaad dooran kartaa cunto kariska cagaaran ee xilliga jiilaalka, halka uusan ahaan laheyn dukaanka, laakiin aad u adag.
Badbaadinta, waxaad u baahnaan doontaa maaddooyinka ugu caamsan ee marti-geliyeyaasha ay ku jiraan jikada.
Caarilka for geedo
"La Sota" tallaalka qaxwaha: isticmaal, sida loo abuuro
Waxaan ku koraan cherry Zhukovsky ee beerta our
Qallajinta guriga dhexdiisa
Top 5 cuntada ugu fiican ee dadka ka soo boodhaha iyo malab. Guryaha waxtarka leh iyo ka hortagga suurtogalka ah
Cawska cawska cagaaran
Noocyo isdabajoog ah
Noocyada Apple ee gobolka Leningrad
Noocyada Terry ee pelargonium degaan meel gaar ah ee qalbiyada ee bannaanka - burooyinkeeda cirridka muuqaal aad u qurux badan oo cajiib ah. Sababta oo ah muddo dheer, ubaxa qurxinta, dhirtaas waxaa lagu beeray balakoono, gumeysi daaqadaha iyo meelaha banaanka ah. Pelargonium Norland uqalminta dareen gaar ah, markaa ka fikir in sida loo beeray si wanaagsan loo daryeelo ubax? Read More
Sida loo koro jeeriga ee Siberia
Si aan caadi ahayn u qurux badan - tulip Pelargonium. Qeexitaan, noocyo, xeerar daryeel iyo dhalmo
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Digsiyada 2019